Kuzviuraya kwaRachel Foster: chinonakidza chaizouya cheGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Kuzviuraya kwaRachel Foster: chinonakidza chaizouya cheGNU / Linux
Kuzviuraya kwaRachel Foster mutambo mutsva wevhidhiyo neLinux rutsigiro iyo isati iriko, asi ichiri kuongororwa. Pamusoro pekuwanikwa kweWindows, iyo chete chikuva yaunogona kuiwana pane Steam (pre-odha) uye ne25% dhisikaundi nhasi. Ndinovimba kuti chiteshi cheLinux chichaonekwa munguva pfupi zvakare nekuda kwekuedza kuri kuitwa nevagadziri veItari veMOOD-O-ONE GAMES uye Deadalic Entertainment.
Iri zita rinohwanda nyaya huru inonakidza, ine basa rakanaka rakajeka. Inogona kuoneka zvakakwana mukaravhani yavakaburitsa paYouTube uye iyo yandinokuratidza pazasi. Mutambo wevhidhiyo uri mumunhu wekutanga, wakagadzwa kutanga kwemakumi mapfumbamwe. Nzvimbo iyi hotera iri mugomo, kwauchazofanira kutsvaga zviye uye kugadzirisa chakavanzika chemhuri chakavanzika icho chakahwanda. Zvinonzwika zvakanaka handiti?
Zvakanaka, kana iwe uchida izvo zvawaona nekuverenga, iwe unofanirwa kuziva kuti timu yekuvandudza inosanganisirwa yakataura pane yepamutemo Twitter account yavanotevera kushanda nesimba pakuvandudza, kunyanya mukutsigirwa kweKuzviuraya kwaRachel Foster. Kune runyerekupe rwekuti ivo vari kushanda mukugadzirisa uye kupedzisa kupurinda iyo yekupedzisira nhoroondo kuti ifambe zvakanaka paGNU / Linux, saka zvese zvinoratidza kuti hazvizotora nguva yakareba kuti ubude.
Mamwe marongero ehunyanzvi aunofanirwa kuziva nezve Kuzviuraya kwaRachel Foster ndeyekuti inogadzirwa uchishandisa injini yemifananidzo Shamisa Engine 4. Injini ine simba iyo inokupa iwe zvese zvaunoda nehunyanzvi kuti upedze iyo huru nyaya yekufungidzira iyo yakavakirwa. Uye zvakare, iyo Gameplay iri zvakare inonakidza kwazvo, nekuti iwe unogona kutsvaga iyo hotera yese, ine odhiyo inopa inonyudza uye chaiyo chiitiko, inochengetedza hunyengeri nguva dzese uye inobvumidza yakawanda-rondedzero rondedzero, ichibatanidza zvinhu zvakavanzika uye zvinotyisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Kuzviuraya kwaRachel Foster: chinonakidza chaizouya cheGNU / Linux
Melody: mutambi wemimhanzi wakanyorwa mumutauro weVala